Buttercup, muchinjiko-chikuva chakavhurika sosi password password | Linux Vakapindwa muropa
Buttercup, muchinjiko-chikuva yakavhurwa sosi password password
Nezuro isu tanga tichitaura nezvaDashlane, zvinova maneja wepassword iyo inoshanda se plugin pane Firefox kana Chrome, nguva ino tichataura nezvayo imwe yakanaka kwazvo password maneja iyo iri muchinjika-chikuva (Windows, Linux, macOS uye iOS uye Android), inowanikwawo sekuwedzera kwebrowser yeChannel neFirefox.
Buttercup ine yekuwedzera, zvakanaka yakavhurika sosi, iyo iyo vese avo vanofarira kuziva mashandiro ayo vanogona kuwana yayo sosi kodhi. Uye zvakare, Buttercup ndeye yemahara password password iyo inochengetera mapassword mune 256-bit AES kunyorera. Buttercup inosunungurwa pasi peGNU / GPL Shanduro 3 yakavhurwa sosi rezinesi.
1 Nezve Buttercup
2 Maitiro ekuisa Buttercup paLinux?
Buttercup chengetedza mushandisi mapassword neiyo imwechete tenzi password, iyo neruzivo rwese rwunowiriraniswa pamidziyo yako yese paunenge waiswa application, iwe unofanirwa kungo rangarira iro master password.
Passwords anochengetwa mune yakachengeteka faira, iyo inogona kubva yakachengetwa pakombuta yavo kana chero imwe Dropbox, Google Drayivu, yavoCloud, Nextcloud, WebDAV semasevhisi emakore, kubva iko mushandisi anosarudza panochengeterwa dura repassword.
Buttercup inouya neyakakosha yekubatanidza gadziriso yekuchengetedza mushandisi. Dzivisa kana shanduko mbiri dzikaitwa panguva imwe chete kune iyo faira, munharaunda kana kure. Inotsigira kupinza mapassword kubva kune vamwe vanozivikanwa password mamaneja senge password, Lastpass, uye KeePass.
Yehukuru hunhu izvo zvinomira kunze kweiyi password password maneja yatinogona kuwana:
Buttercup inonyora ese ako mapassword mu256-bit AES kunyorera, Kuona kuti data rako rakachengeteka uye risingabatike kubva kune vakaipa vatambi.
Buttercup yakasununguka kushandisa uye kunyange ine shamwari yekufambisa yaunogona kushandisa kutakura mapassword ako uchienda.
Iyo Buttercup password maneja inosangana mushe mushe nemabhurawuza ewebhu zvinoenderana neLinux seFirefox neGoogle Chrome.
Inoshanda yakafanana neKeePass mune iyo mushandisi inodzora rese password password. Nekudaro, kusiyana naKeePass, Iwe unogona kuyananisa dhatabhesi dhatabhesi neDropbox, NextCloud, yakoCloud, kana WebDAV.
Izvo zvinouyawo neyakareruka-kushandisa-yakavakirwa-mukati password jenareta kugadzira yakasarudzika yakasimba password. Iwe unogona zvakare kutumira ako pasiwedhi se CSV fomati.
Maitiro ekuisa Buttercup paLinux?
Kuti ushandise iyo Buttercup password maneja pane Linux, vanogona kuzviita nenzira mbiri, be it kuisa iyo application pane system kana imwe yacho irikungoshandisa iyo yekuwedzera browser mu Chrome kana Firefox.
Munyaya ye Chekutanga sarudzo ingo enda kune yavo yepamutemo webhusaiti. Kamwe pane saiti, isu tichaenda kune zvekusarudza sarudzo izvo, mune kesi yeLinux, zviripo iyo DEB, RPM mapakeji kana yekushandisa zvakanyanya muAppimage fomati.
Saizvozvowo isu tinokwanisa kuwana iyo yazvino package kubva Github pane iyi link iripazasi.
DEB 32 zvishoma
DEB 64 zvishoma
32 ikakuruma RPM
64 ikakuruma RPM
Kuisa yeaya mapakeji (deb kana rpm) iwe unogona kuzviita neyako yaunofarira package maneja kana kubva kune iyo terminal neinotevera kuraira (zvinoenderana nepakeji iwe yawakadhinda).
Mune iyo faira AppImage Ivo vanofanirwa kuchipa iyo mvumo inodiwa isati yaitwa, izvi zvinogona kuitwa nemirairo inotevera:
Uye ivo vanokwanisa kuendesa iyo faira nekukanya kaviri pairi kana kubva kune iyo terminal ne:
Zvino ivo ndivanaani Arch Linux, Manjaro, vashandisi veArco, pakati pezvimwe zvigadzirwa zveArch Linux Unogona kuisa password password kubva kuAUR nemirairo inotevera:
Finalmente kune avo vanosarudza kuishandisa sechiwedzero mubrowser yavo, Iwe unogona kuisa kubva pane zvinotevera zvinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Buttercup, muchinjiko-chikuva yakavhurwa sosi password password
Ingori nuance, keepass inobvumidza, zvirinani, kuchengetedza dhatabhesi mune gore rakadai sedropbox uye sync.
Icho chiitiko changu mumahwindo
China inoda yayo yega sisitimu yekushandisa uye inongoshandisa yemuno Hardware uye software